SomaliTalk.com » Cumar C/rashiid oo Booaqsho ku tegey London, UK
Waxaa October 26, 2009 magaalada London ee cariga ingiriiska safar shaqo ku soo gaaray goor danbe oo maanta (26/10/2009) ah wafdi sare oo uu hogaaminayo Ra’isulwasaaraha DFKM Somalia Dr. Omar A. A. Sharmarke oo ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadiisa.
inta uu joogo raisulwasaaraha Somalia magaalada London ee cariga ingriiska, waxaa la filayaa in uu kulamo la yeesho masuuliyiin sar sare oo ka tirsan dowlada Britain oo uu ugu horeeyo, Preminsiterka Britain Mr. Gordon Brown, iyo xubno ka tirsan wasaarada arrimaha dibada sida wasiirka arrimaha didbada David Milband .
Sidoo kale waxuu raisul wasaaruhu kulamo kala yeelan doonaa arrimaha Somalia xubno iyo hay’ado caalami ah oo daneeya arrimaha Somalia.
Primisnter Sharmarke wuxuu sidoo kale La hadli doonaa MAALINTA ARBACADA AH jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool UK, oo xaflad soo dhoweyn ah ugu qaban doona magaalada London. hoolka caanka ah ee Freinds House London..
RA’ISUL WASAARE OMAR A/RASHID ALI SHARMARKE OO XAFLAD SOO DHOWEYN IYO MAAMUUS AH LOOGU QABAN DOONO MAGAALADA LONDON FRIENDS HOUSE
5:30 GALABNIMO—10:30 FIIDNIMO
jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK gaar ahaan magaalada London oo xaflad soo dhoweyn ah uqaban doona wafdi
sare oo uu hogaaminayo Ra’isulwasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliya Dr. Omar A/rashid Ali Sharmarke.
maalinimada Arbacada ah 28-October-2009, Saacaduna tahay 6:00 Galabnimo ilaa iyo 10:30 fiidnimo in lagu qaban doono Hoolka caanka ah ee Friends House .
Sharmaarke M. Abshir
Raiisul Wasaaraha Soomaliya iyo Sarkaal Sare oo ka tirsan Qaramadda Midoobay ayaa furay Shirka Guddiga Heerkiisu Sareeyo
Nayrobi, 23 Oktoobar 2009 – Raiisul Wasaaraha Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, iyo USG-ga u qaabilsan Unta Arrimmaha Siyaasadda, Lynn Pascoe ayaa ku baaqay in si dhakhso ah lo kordhiyo taageerada ay Bulshada Caalamka siineeyso Soomaaliya.
Isaga oo ka hadlaayo furitaankii shirkii koobaad ee Guddiga Heerkiisu Sareeyo, Raiisul Wasaaraha Soomaliyeed wuxuu yiri, Dowladdu waxay u howlgelaysaa sidii ay dadka ugu qaban lahayd adeegyada asaasiga ah, isla markaasna xiriir wada xaajood ula yeelan lahayd dadka dhex-dhexaadka ah ee doonaya in wada hadal lala yeesho. Hase ahaatee Raiisul Wassarahu wuxuu dalbaday in la joogteeyo taagerada Bulshada Caalamka siineeyso Dawladda.
Figradda Raiisul Wasaaraha waxaa tageeray Mr. Pacoe oo Nayroobi u joogo in uu wada hadal ka galo arrimaha Kenya iyo Soomaliya. Pascoe wuxuu horey u soo booqday waddamada Angola, Burundi, South Africa iyo Uganda.
“Hadda waxaan joognaa wakhtigii wax qabadka, waa la soo dhafay wakhtigii hadalka” ayuu yiri Mr. Pascoe. “Tani waa fursad aad u wanagsan oo lagu bedeli karo xaladii qalafsanayd ee ka jirtay Soomaaliya 18kii sanno ee la soo dhafay”.
Dhamaadkii Shirka waxaa la soo saaray baaq, lagu soo dhaweynaayo xiriirka cusub ee wada-shaqaynta dhexmaridoona Soomaaliya iyo Bulshada Caalamka.
Guddiga Heerka Sare waxaa lagu dhisay qodobka 9 aad ee Heshiiskii Jabuuti si loo dhiiri-gelyo in wada-hadal dhexmaro Dawladda iyo Mucaaradka. Guddiga Asaga oo raacaaya hab cusub aya albaabadiisu u furnaan doonaa wadahadal ayada oo isla markaasna la isugu kenayo Dawladda Soomaaliyeed iyo Bulshada Caalamka si loo xaqiijiyo helitaanka hab loo wada dhan-yahay ee lagu hirgelinaayo Heshiiska Jabuuti, gaar ahaan dhinacyada la xiriira arrimmaha nabadgelyada, isxukunka, cadaaladda iyo dib-uheshiisiinta, arrimmaha bini’aadinimada dib-dejinta, dib-udhiska iyo horumarka
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: DFKMG, London